Wisdom – Min Thayt
လူူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောက၊ ဘယ်တော့မှ ပြင်ညီကွင်းပြင်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘော မရှိပါဘူး။ ဓနဥစ္စာအားဖြင့်၊ အသိအားဖြင့်…. လူနေမှု အဆင့်အတန်းအားဖြင့်၊ ဓလေ့စရိုက်အားဖြင့်။ ဒီနေရာမှာ၊ အသိကွင်းပြင် မညီမျှမှု အကြောင်းတွေကို ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တစ်ချမ်းပဲ့အသိတွေနဲ့ လူအုပ်စုတွေ အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။ အာဏာသိမ်းမှုကို တော်လှန်တဲ့...
Min Thayt December 9, 2019 December 11, 2019
မိုက်မဲသော ကျက်သရေဟူသည် မရှိပါ။ ကြည်နူးဖွယ် ကျက်သရေဟုသာ ရှိပါသည်။ ကျက်သရေသည် မိုက်ခြင်းနှင့် မတွဲ။ ကြည်နူးဖွယ်၊ သာယာဖွယ်၊ နူးညံ့ဖွယ်၊ မင်္ဂလာရှိဖွယ်…. စသော အနက်သဘောနှင့်သာ ယှဉ် တွဲပါသည်။ ညနေခင်းသည် သာယာပါသည်။ လေပြေသည် တိုး၍ တိုက်ခတ်နေသည်။ လူများ ပျားပန်းခတ်အောင် သွား လာနေသော်လည်း မကျပ်တည်း။ မရှုပ်ထွေး။ မဆူညံ။ အားလုံးသည်...
ပညာအလင်းမိတ်ဆက် (မုံရွေး မိတ်ဆက် စာစဉ်) Introduction the Enlightenment စာအုပ္အညႊန္း ပညာကို ငမ်းငမ်းတက် လိုချင်နေတဲ့ ငါ့အဖို့ ၊ ပညာရဲ့သဘော၊ ပညာရဲ့သဘာဝနဲ့ ပညာ့ရဲ့သမိုင်းစဉ်ကို လေ့လာတိုင်း ဘယ်သောအခါမှ ညီးငွေ့သွားသည် ဟူ၍ မရှိခဲ့ချေ…. မုံရွေး အုပ်စုကို စာဖတ်နာသူတိုင်း အတော်သတိထားမိမည် ထင်သည်။ ကိုတာ၊ ဘိုးလှိုင်၊ ကျော်ဝင်း၊ တင်မောင်သန်း...